Ukuphupha ngeSalamander ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neSalamander. Ukwazi intsingiselo yamaphupha kunokukunceda ukuba uzazi ngcono, ukuba ukwazi ngakumbi malunga nokutolikwa kwamaphupha kuyaqhubeka nokufunda.
Ialamalamers zasemanzini. Bahlala belahlekile nge-newt ngenxa yomzimba wabo ofanayo. Iindidi ezininzi zeesalamanders zihlala emhlabeni, kodwa kukwakho neesalamanders zamanzi. Ummeli odumileyo wohlobo lwayo yi-salamander enolusu olucekeceke. Namhlanje uyi-mascot yenkampani yezihlangu: I-Lurchi, isalamander yomlilo, ogama lakhe lalibakho zihlekisayo ukusuka ngo-1937.
Iintsomi kunye neentsomi ziye zaxinaniswa kwesi silwanyana ukusukela kumaxesha amandulo, kwakusithiwa sinokuphila emlilweni, abanye bade bathi isalamander yayinamandla okucima umlilo. Ngapha koko, yayigqalwa njengeyityhefu ngokugqithisileyo; Ukuchukumisa nje umlingo kunokubangela iimpawu zetyhefu kunye nerhashalala. Kwimibhalo yamandulo kunye nemifanekiso, ngamanye amaxesha wayebonakaliswa njengenyoka enomsila omde, ngamanye amaxesha njengenamba.
Kuyinyani ukuba i-salamanders zizilwanyana ezingaqhelekanga ezinokuphinda zibuyele kwilungu lomzimba wazo ukuba zilahlekile ngenxa yexhoba okanye ngengozi. Kodwa kuthetha ntoni xa sidibana nesalamander ephupheni?
1 Uphawu lwephupha «isalamander» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isalamander» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isalamander» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isalamander» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengakwintsomi, i-salamander ihlala ibonisa umlilo kutoliko lwamaphupha. Oko kunokubonisa nomdlaUmzekelo, ukuba umphuphi uthandana okanye ubudlelwane obudala buvuselelwa.
Kodwa inokuba lishishini elinobungozi elifuna ukuzithemba. Isalamander ibonakala apha njengomlamli, ifuzisela ingqondo ebandayo, umbono osindisayo okhusela umphuphi ekubeni anganikezeli ngokupheleleyo kumsindo wakhe.
Ke ngoko, iphupha apho i-salamander ivela khona inokubonisa umlo okanye imeko enzima. Umphuphi kufuneka acinge ngengqondo yakhe kwaye azame ukujongana nemeko ezolileyo kunye no intloko ecacileyo ukujongana nale meko.
Ukuba umphuphi uceba iprojekthi okanye unento enkulu ecwangcisiweyo, i-salamander inokuthetha ukuba iprojekthi iya kuba nayo mpu melelo, ukuba iqela elinomdla lisondela kuye ngendlela ecingayo nefanelekileyo. Uphawu lwephupha luyalumkisa imprudence kunye nokukhokelwa ziimvakalelo zakho.
Uphawu lwephupha «isalamander» - ukutolikwa kwengqondo
Njengecilikishe kunye nenyoka, i-salamander nayo ikwenza oku ephupheni: engekho zingqondweni. Kuba ungaphulukana namalungu omzimba ngaphandle kokuzenzakalisa, kuhlala kuthetha ukuyeka kunye nokuba nesibindi. Kodwa ukubonakala komlilo kukwadlala indima ebalulekileyo.
Ukuba uphupha nge-salamander yomlilo, inxenye yakho unokuyilangazelela. utshintsho, amandla okucoca umlilo abonisa ityala okanye imithwalo emidala yokutsha.
Nangona kunjalo, umlilo unokusetyenziselwa inkanuko kwaye ubukhulu. Mhlawumbi ukhathazekile ngokungazi malunga ne isini. Ukwabelana ngesondo kunokuba ngamandla obomi kunye nokuqhuba. Uthando kunye ukuzinikela ezo zifanekiselwa yintulo inokudibana nomntu okanye ibonakalise ulangazelelo.
Uphawu lwephupha «isalamander» - ukutolika kokomoya
Intulo sisilwanyana somoya. Njengophawu lwephupha, lumele inguquko, njenge kucoca uphuma phi umphefumlo njenge-phoenix eluthuthwini. Unxibelelwano olufihlakeleyo luyanyibilika, amandla omlilo akhokelela kutshintsho olunzulu.